Chaizvoizvo madhiri eAmazon dunhu | Absolut Kufamba
Chaizvoizvo madhiri eAmazon dunhu
Absolut Colombia | | Korombiya
Kana iwe uchida kunakirwa gastronomy kana iwe uchienda kune imwe nyika, saka zvirokwazvo iwe unozoda kuziva kuti ndeapi madhishi kana zvekudya zviri zvinozivikanwa kana zvakajairika kwenzvimbo. Nhasi ndoda kutaura newe nezve zvakajairika madhishi mudunhu reAmazon, uko sezvinotarisirwa, chikafu chinodyiwa nevanhu vayo chinobikwa pamoto mudiki uye chinogara chakabatana nezvigadzirwa zvemudunhu rino.
Dunhu reAmazon rinotora kumabvazuva uye chikamu chekumaodzanyemba kwenyika, saka rakakura kwazvo. Inosanganisira zvisiri pasi pemadhipatimendi eMeta, Casanare, Arauca, Vichada, Caqueta, Putumayo, Guainia, Guaviare, Vaupes neAmazonas. Munharaunda yese iyi izere nemapani uye nzizi dzegastronomy ine simba kwazvo inosanganiswa nezvinhu zvakawanda zvakasiyana zvinouyawo kubva kumiganhu yeBrazil nePeru, Ndokusaka iwe uchigona kuwana akawanda akasiyana, akasarudzika uye zvakare akajairwa chaizvo madhishi.
1 Chikafu chakajairika chenharaunda yeAmazon
1.1 Peruvia Juane
1.2 Ceviche, imwe yemidziyo yakajairika mudunhu reAmazon
1.3 Suri palma grubs, zvakajairwa chikafu mudunhu reAmazon
1.4 Bhengi reBrazil
1.5 Hove yeGamitana
2 Chikafu chinowanzoitika
3 Nyama yemutambo
Chikafu chakajairika chenharaunda yeAmazon
MuAmazon yePeruvia unogona kuwana ndiro yejuanes inotengeswa mumisika kana kune vanotengesa veko. Iwo musanganiswa wemupunga nenyama - kazhinji huku - uye miriwo yakasiyana yakaputirwa nemashizha ebhanana.. Ichi ndicho chimwe chezvekufarira chikafu chevanhu vanogara munyika idzi uye chevashanyi vanosarudza kuenda kunoedza dhishi iri.
Ceviche, imwe yemidziyo yakajairika mudunhu reAmazon
Kana iwe ukashanyira Ecuador kana Peru, iwe uchaona kuti ndiro iyi inotaurwa uye inoonekwa mumaresitorendi, kusanganisira vanhu munzvimbo yeAmazon. Iyo dhishi ine hove mbishi yakasaswa nemon uye nezvinonhuwira. Izvo zviri nyore uye ceviche inowanzo shandiswa nesaladi kana bhanana machipisi. Vanhu vazhinji vanogona kuve nechido chakakura cheiyi hove dhishi kana vangangodaro vasingazvifarire zvachose.
Suri palma grubs, zvakajairwa chikafu mudunhu reAmazon
Kana iwe uchida kudya chimwe chakasiyana iwe unongofanira chete kutarisa kune tsvimbo dzakapindirwa nenyama inozivikanwa suri palma grubs. Iwo maruva echikadzi nhema mbichana nyuchi - Rhynchophorus palmarum- iwo anonaka munharaunda.
La entomophagy kana chii chakafanana, kudyiwa kwezvipembenene izano rakakurudzirwa kubatsira matambudziko enzara pasi uye kudzora kutemwa kwemiti uye kurasikirwa nenzvimbo yemhuka dzakawanda. Zvipembenene zvine mafuta mashoma, zvine mapuroteni mazhinji, uye zvinokura nekukurumidza uye zvinobereka nekukurumidza. Izvo zvakachipa kutenga uye kugadzirisa uye zvinoda mashoma masosi kuti vararame.
Kana iwe wakashinga zvakakwana kuti utyore matambudziko ako ekudya nezvipembenene unogona kuzviedza… vanhu vanogara mumatunhu aya vanokuudza kuti zvinonaka. Vanochida.
Kana iwe uri muBrazil Amazon saManaus kana Santarém, iwe unofanirwa kuziva kuti haugone kupotsa barbecue yeBrazil. Kudya kweaya chaiwo madhishi enharaunda yeAmazon anosanganisira nyama yakabikwa yenguruve, nyama yemombe kana huku. Vanogona kazhinji kushandirwa pane skewers uye vanhu vanofarira kwazvo kuishandisa nenzira iyi. Pamusoro pekushandirwa mumaresitorendi chaiwo uye nedzimba dzenyama, pane yakasarudzika tsika iyo vashanyi vanowanzo farira. Iko kunowanzo kuve neyakagadziriswa mubhadharo pamberi pevamiririri veresitorendi kuti vakupe iwe skewers yenyama dzakasiyana kuti iwe ugone kuzviedza dzese.
Imwe yemidziyo yakajairika mudunhu reAmazon ndiyo Gamitana hove iyo inozivikanwa nehukuru hwayo uye Inowanzove hove iyo inodiwa nevanhu vemudunhu iri. Ivo vanowanzoigadzira yakashongedzwa uye inogadzirwa neyakagadzirwa neonikisi iyo inosanganisira zvakare: gariki, paprika, kupenda, thyme, bay shizha, batare uye muto mutema unowedzerwa kuravira.
Inosanganiswa nemupunga, miriwo, huku, maorivhi, nyama, tuna uye korianderi. Chekupedzisira, iyo izere negemitana uye inoshumirwa ne patacones, yucca uye chili. Icho chikafu chakasimba kwazvo icho munhu wese anochizama chinowanzo farira.
Munharaunda ino uye nekuda kwekuvapo kwesango, muDhipatimendi reAmazonas, michero yekunze inowanzo kuwanda, iyo inoshandiswa kugadzira majuji akaisvonaka, majuice, madhiri uye makirimu ane zvinonaka zvakanaka kwazvo.
Pakati pezvikafu zvinogara vanhu vanogara ipapo uye vashanyi zvakanyanya mabhanana, yucca nehove. Hove inoshandiswa mumidziyo yakawanda yakasiyana seyakakomberedzwa gamitana, mbabvu dzegitana, mabhora epirarucú uye tarpon yakagochwa, pakati pevamwe. Zvidyo zvaunogona kuwana mumaresitorendi uye kuti kana iwe uchida kugadzira mukicheni yako kuyedza zvinonaka zvako unogona kutsvaga mabikirwo online kuti uzviite pamba, kunyangwe zvakaoma kuwana kubata kwakakosha kwavanopa mune ino chikamu che nyika.
Chekupedzisira, imwe yemidziyo yakajairika yedunhu reAmazon iyo inowanzo kudyiwa nyama uye nyama yemutambo iwo muenzaniso mune gastronomy yechikamu chino chenyika. Nyama yeimba inotengeswa zvakanyanya munzvimbo ino yepasi uye inofambisa mari yakawanda pagore. Munharaunda yeTahuayo yePeru, vanowanzovhima zvakanyanya uye imhuka dzinounzwa kumusika wekudyiwa nevanhu. Kuvhima kutyisidzira kwakanyanya kumhuka uye kuyedza kuchengetedza mhuka neAmazon - uye kutenderera pasirese.
Mhuka zhinji dziri munjodzi yekutsakatika nekuda kwekuvhima nekutengesa nyama yemusango. Iyo tsoko dzine mvere nedzimwe nyama Ivo muenzaniso wakajeka wengozi yekuvhima. Mhuka zhinji dzinotyisidzirwa nenjodzi yekuvhima uye kushandisa zvakanyanya nekuda kwekurasikirwa nenzvimbo.
Izvo iwe zvauchangobva kuverenga ndezvimwe zvakajairwa ndiro dunhu reAmazon uye zvakare chikafu chinodyiwa zvakanyanya uye icho vanhu vanofarira zvakanyanya. Wati wambosvika kunzvimbo yeAmazon uye wakave nerombo rakanaka zvakakwana kuyedza chikafu chinowanzoitika mudunhu reAmazon chavanopa nekutenda kune kwayo huru gastronomy? Tiudze kuti ndeapi madhishi aunonyanya kufarira uye ndeapi iwe ausina kufarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chaizvoizvo madhiri eAmazon dunhu
CIELO JIMENEX akadaro
kune fanor ndinokukumbira kuti uratidze madhirowa edzidziso, kwaanosokerwa uye magadzirirwo awo
Pindura CIELO JIMENEX
IColombia yeAmazon ine zvakawanda zvekuratidzira, hupfumi hwayo hwekudya hunofanirwa kuve hwakawedzeredzwa nemifananidzo inotiswededza padyo nayo. Makorokoto
Ini ndoda iwo marepepe uye madhiri, kwete aya anobva kuColombia, uye haudi zvawataura, ash
Pindura kune emma
Ivo vanofanirwa kuisa mabikirwo echinyakare madhishi eAmazon nekuti hapana
isa mamwe mabikirwo emidziyo kubva kuAmazon
valentina oliveros ramirez akadaro
Ndakaifarira zvakanyanya, maita basa, yaive yakapusa uye yakananga
Pindura valentina oliveros ramirez
HANDIKWANISE KUZIVA MUFANANIDZO KUPAGE Iri, HAPANA DA-MIER.
GERAL CHEMA akadaro
noooo iyi acco haina maturo kwatiri masasi aya bn siyai peji rino asi kana muchienderera mberi zviri nani kkoloquen algoooo ZVAKANAKA !!
Pindura kune GERAL BEADLES
NANI OZ akadaro
KUSVIRA KWAKAITA PAGINAA !!
ITA CHIMWE CHINOGONA
HAUGONI KUWANA CHINHU NEZVENYU ZVINOTARIRA MUNHU KUTAURA YANGU Q FUCK YANDINOTARIRA
KUMWE KUMADHURE KUNOKanganisa
AHH AND NDINODA WIZARD WEOZ
Pindura NANI OZ
veronica rey akadaro
Ndine husimbe kuverenga izvi, kutora basa Bagos, baba vangu vane maresitorendi akazara uye ini handidi izvo zvakapusa zvinhu
Pindura veronica rey
izvi zvinofanirwa kunge zvakatwasuka
Pindura kuna lina
Hei kana iyo voleta handigoni kutenda gasi ke reseta zvakashata
Pindura kuna andrehitha
emerald mupata mutete akadaro
Ndokumbirawo mundibatsirewo neresipi yedhisiki chaiyo kubva kuVaupes
Pindura Esmeralda Valle Delgado
Ndokumbirawo, isu tivandudze zvirimo papeji, mazuvano kune chikafu chakasiyana chinowanikwa kwete muletisi chete, asi mubazi rose… ..
Pindura kuna JOSE ALVARADO
Kunze kwerondedzero yaunotaura, isu tine zvinhu zvakamonerwa mojojoy, yuca masato, iyo casabe mune zvese zvarinoratidzira, hove calderada, tichitaura nezvehove isu tine dorado, pirarucu, palometa, carahuazu, sabalo, bocachico , iyo sabaleta, nezvimwe ...
Michero yekunze yakadai se: copoazu, arasa, camu camu, asai, chontaduro, milpesos, mazambiringa emusango, guama, nezvimwe ……
Nicol Yuliana akadaro
Ndiri kutsvaga madhishi chaiwo mudunhu reAmazon
Pindura Nicol Yuliana
keisy maireth akadaro
Pindura kune keisy maireth
Zvakanaka, ruzivo rwakaratidzika kuva rwakanaka kwandiri asi ivo vanofanirwa kuisa yakawanda yedunhu rino semadhipatimendi anoumba nzvimbo yacho zvakanyanya asi nekutenda kune chaiwo madhishi avakandishandira zvakanyanya ... ndatenda
Pindura kuna isabella
Ini handina kushumira chero chinhu, chii chisina basa
Pindura kuna marsela
Iri peji rakanaka kwazvo, asi iwo mabikirwo noooooooooooooooooooo ……. hahahahahahaha ………………………………… mapenzi
KANA DZIDZISO DZENYIKA DZAKANYORWA ASI RECIPE INOSHAYA, NDIZVO ZVANDAKARAYIRA DIHI NEZVINOGONESESA MUKUTI NDinovaona VAKAIPA
ASI NDOGA NDAKAWANA A 5 YEMUFANANIDZO WAKATOGONESESA IYE GRAXIAS
Fabian Cabrera akadaro
Ini ndaifunga kuti vaizotaura nezve gastronomy yedunhu reAmazon uye kune mashoma madhipatimendi
Pindura kuna Fabian Cabrera
Iyi queer haina chero chinhu, ivo vanofanirwa kuisa yakawanda pane michero kupfuura mapenzi
Pane zvakawanda zvisipo kuti gwvon peji rino ini ndichaudza munhu wese kuti asapedze nguva pane ino peji
Aya macoxisas anobatsira kwazvo pamabasa
Pindura kuna angelina
Nei vasingachaise mashandiro akaitwa dhishi rino rekudya, ndiko kuti, tsananguro yemagadzirirwo aro ...
Pindura kuna juan carlos
rodriga amariles bentacur akadaro
Sei vasingayese mabikiro ayo dhishi?
Pindura kuna rodriga amariles bentacur
Ivo havape iyo yekubheka iyo inosemesa ... ndinofunga kuti Colombia haizombove iri gastronomic yekuenda, nekuti Venezuela iri kutora mukana
Pindura kuna dana
Ndatenda zvinondishandira zvakanyanya
Pindura kuna Eliza
inzvimbo yakanaka zvakadii
Pindura kuna jhonatan
Ini ndinotanga ndatanga
adriana valderrama akadaro
Pindura kuna adriana valderrama
jeffersson gil akadaro
Ivo vanofanirwa kushambadza zvimwe nezve iyo Amazon inopesana zvishoma
Pindura kuna jeffersson gil
iyo amozonas yakanaka kwazvo
Pindura kuna leydy
danna Valentina Spain Hernández akadaro
Pindura kuna danna Valentina España Hernández
ndinokutendai iwe wsssssssssssssssssssssssssssssssssssss
juan josé akadaro
Ndatenda zvikuru chaizvo!
Pindura kuna juan josé
Chaizvoizvo zvinwiwa zvekumwa muLondon